Ireo toerana nohamaivanina ao Londona: Aiza no haleha, inona no hojerena – Avy amin’ireo mpandray anjara ato amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2019 10:58 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Septambra 2015)
Zaridaina Kew, Londona – Sary CC-BY-20
Tena ‘mivezivezy’ tokoa ireo mpandray anjara ato ain'ny Global Voices ary monina na azo lazaina fa efa nonina tany rehetra tany. Ho fantarintsika ny momba ireo toerana sasantsasany tena ankafizin-dry zareo indrindra any amin'ny tanàna misy azy ireo amin'izao fotoana izao. Atombotsika ity andiany ity miaraka amin'i Abdelmadjid, monina ao Londona. Telo na efatra no sosokevitra homenay anareo, ankoatra ireo mpifaninana marobe hafa, saingy amin'ny fijerena mandrakariva izay hevitry ny hafa manerantany.
Zaridaina miafina ny Barbican Center, toy ny ala mikitrok'ireo trano vita lalotra vatosokay izay matetika no tsy mahita izay taramasoandro akory. Feno trano tsy dia avo loatra manodidina azy: saingy aza avela ho izany no hanakana anao, tohizo, midira! Ka tsinjovy ny iray amin'ireo toerana isan'ny manankarena indrindra ao Londona amin'ny resaka kolontsaina sy taokanto: kaonseritra, sarimihetsika, teatira, fampirantiana ary hetsika maro. Rehefa mitety mamakivaky ilay Ivontoerana, tonga eo amin'ny tokotany marin-tampon'ny Barbican isika, izay indraindray monja vao feno olona. Manodidina ny dobon-drano lehibe iray misy rano mitsifotsifotra, misy toerana maro atolony anao azo ipetrapetrahana, ary hatramina toerana fisotroana kafe.
Tokotany marin-tampona ao amin'ny Barbican Centre – Sejma Prodanovic – Flickr
Tsena Manzes Pie
Tsena L. Manze Pie – sary an'i Paul Hudson nampiasàna lisansa CC
Mifandrirotra aminà krizy mahatsiravin'ny fampiasambola amin'ny asa fanorenan-trano i Londona. Saingy na eo aza io, betsaka ireo tanàna manodidina no miezaka mitahiry ny tantaran-dry zareo sy ny maripamantarana azy. Any atsinanan'ny tanàna, tsy nanova ny endriny sy ny ravaka nahafantarana azy hatramin'ny nanavaozana azy tamin'hy 1929 ny Manzes, tsena fivarotana mofo tsy manam-paharoa. Ny Manzes no mandroso ireo sakafo tena mafilotra sy malaza: ny mofo fisaka misy hena na amalona. Toejavatra iainana tokana amin'ny vidny mirary.
Ny dobo Shadwell
Niorina efa ho taonjato roa eo ho eo, ny seranan'i Shadwell no mandray ireo entam-barotra avy amin'ny lafivalon'ny Ampira. Simba nandritra ny Ady Lehibe Faharoa izy ireo , dia avy eo navela ho anaty faharavàna ny ankamaroan'izay faritra nanakaiky ireo seranana, mandrapahatongan'ny tapaky ny andian-taona 1980. Avy eo nisy fandaharanasa fanarenana nanampy ny fiverenan'ny mponina tao amin'ity faritra ity izay indrisy fa tsy afaka niala tamin'ny fanitarana tanandehibe nihatra efa ho tamin'ilay tanàna manontolo mihitsy. Ny seranana anatiny anefa dia lafatra ho an'ny fitsangantsanganana, fisotroana kafe, ary na hanaovana fanatanjahantena kely koa aza. Ny fitaingenana Canoe, kayak, fikorisàna ambony rano, ‘aviron’ ary hatramin'ny fihanihana (climbing); marobe ireo hetsika no atolotra ho anao mandritry ny taona ary voalaza mihitsy aza fa rehefa lohataona dia misokatra ho an'ny filomanosana ny moron'ny seranana.
Ny dobo Shadwell – Sary Tom Reading CC license BY NC
Tsy hoe fitsaratsaram-poana, fa i Londona dia iray amin'ireo tanandehibe eto an-tany be olona maro avy amina firenen-tsamihafa. Mandritra ny volan'ny Ramadany, izay manomboka amin'ny lohataona ho an'ity taona ity, ny tsirairay amin'ireo vondrom-piarahamonina miozolmana ao an-tanàna (Akaiky sy Afovoany Atsinanana, sobakaontinanta Indiàna, ary ny Farany Atsinanana) dia mankalaza ny famaranana ny fifadiankanina amin'ny fombany avy.
Eo amin'ny Lalambe Edgware, rehefa manomboka ny famaranana ny fifadiankanina, feno mandritra ny alina tontolo hatreny imorony ilay tokotany marin-tampona. Shisha, dite, mozika; tsy misy afaka milahatra amin'ny toejavatra iainana eo. Raha mitaha amin'ny takarivan-dohataona any amina firenena iray ao Afovoany Atsinanana, sy ny fientanentanan'ny lalambe iray goavana ao Londona, midadasika be ny safidy raha resaka fisotroana kafe sy trano fisakafoanana.